unyaka 1 7 edlule #1118 by UJohn omdala
Njengoba igama lami lomsebenzisi libonisa ukuthi ngingaphezu kwe-60. Isipiliyoni sami sangempela sokundiza emhlabeni bekuyisikhathi eside esidlule kwiChipmunk neVickers Varsity. Ngiqale ukuhamba ngendiza eminye iminyaka engu-16 edlule nge-FS eyikhulu yezindiza ne-pc evela emhlabeni wePC. Kuyo yonke le minyaka ngichithe imali eningi kusoftware nakwi-Hardware, ngilwela okungokoqobo. Manje senginesihloko esiphezulu sekhompiyutha esezingeni eliphakathi kusuka eChillblast. I-Oculus VR nendawo ye-orbx. I-pc yami ithengwe ngoJulayi 2017 futhi yeza ngeWindows 10. Ngibe sengibeka FSX Steam in. Konke lokhu bekulokhu kulandela ukuphapha indiza eyodwa. I-Douglas DC3. I-Flight Legends of Flight icishe iphelele, njengoba ngihlala eLicolnshire engekude neRAF Coningsby kanye neMpi yaseBrithani YeSikhumbuzo Flight kanye neDakota ZA947. Ngiphinde ngibe isivakashi esivamile eDuxford emhlabeni wangempela nasemhlabeni wokulingiswa. Kukhona i-freeware ethandekayo enenketho yokubonisa umoya ukuze ngikwazi ukundiza eceleni kwenqaba endizayo 'Sally B'. Konke kuhle emhlabeni wami kepha nansi into enkulu. FSX USteam uthathe isinqumo sokuthi ngeke kudlale kahle ngeWindows 10. Ngakho-ke kwadingeka ukuthi ngilume inhlamvu bese ngishintshela kuyo P3D I-V4. Nakhu kuza ngezinganekwane ezingezansi ze Flight DC3 ngeke zingene ngaphakathi P3D. Futhi ngeke i-freeware i-Duxford. Ngakho-ke ukuthola i-C47 yakho kunguNkulunkulu ngokuphelele. Iphelele, kufanele ngazi njengoba bengikade ngigibele eDakota yangempela. KULUNGILE awukho iphunga. Kepha eduze kwangempela njengoba sim ingathola. Ukugxekwa kwami ​​ukuphela, akukho niggles, umsindo noma ukungabikho kwawo ukushintshwa kanye namaphampu kaphethiloli kanye nokuphuma kwezingcingo. Ngindiza i- paratrooper futhi ngabe ngiyithanda ngemibala yeRAF. Ngonyaka olandelayo emhlabeni wangempela kuzoba namaDaks ngaphezulu kweNormandy ephonsa ama-parachutists kumasayithi wokufika eNormandy. Ngizobe empeleni ngindiza inguqulo ye-sim. Ngiyethemba futhi ukuthi ngizohamba eDakota. Kepha ngiyaphinda ngiyanibonga ngale Dakota enhle ebengingayikhokhela ngentokozo.
unyaka 1 6 edlule #1119 by rikoooo
Siyabonga ngesingeniso sakho esihle. Siyajabula ukuthi ungakwazi ukuhamba nge-C47 ngaphandle kokukhishwa. Siyakwamukela esithangamini.
Isikhathi ukudala page: 2.460 imizuzwana